Runyerekupe nezve chishandiso chitsva cheApple - magirazi akachenjera - anga achipopota kubvira kutanga kwegore. Ipo iyo kambani, senguva dzose, yanga ichihwandisa nezve zvigadzirwa zvayo zviri kuuya, zviitiko zvechangobva kuitika sekutenga kuchangobva kuitwa kweApple kambani yekutevera maziso SMI yakapa pfungwa kune pfungwa yekuti tingaone magirazi eApple akangwara mune ramangwana.
Kunyange magirazi eApple akangwara angaita senge kutenderera kubva kuSnapchat Spectacles kwakatangwa gore rapfuura, icho hachisi chokwadi. Apple yakanyatso isa bvumidzwa ye "musoro wakataridzwa kuratidzwa," anopfuura makore gumi kumashure. Iyo patent yakatsanangura maratidziro angaita mifananidzo kuti ibudise pesipire kuratidza, uko kunogadzira "inosimudzira yekuona chiitiko."
Verenga: 5 Zvinotarisirwa Zvimiro zveApple Smart Magirazi Anosanganisira AR, Siri Tsigiro Uye Inzwi Kufona
Iyo chishandiso yatanga kugadzira buzz nekuti ichangoburwa yekupa cheni kuvuza kunoratidza kuti kuri kushandisirwa kushandira. Kubudikira neanofungidzirwa Foxconn mushandi yakaratidza kuti inogona kuve yakagadzirirwa maikorofoni, accelerometer uye i-in-yakavakirwa rutsigiro rweakawanda mabasa senge nemaapps akadai seTinder uye kunyangwe kufona kwezwi. Munhu wacho akaburitsa pachena kuti magirazi eApple akangwara anoshandisa $ 150 acetate furemu inokwanisa kutsigira magirazi ekurapa, aine akabatanidzwa magetsi maseru.
Kubva pane zvatiri kuziva parizvino nezve magirazi ane runyerekupe, tinogona kupenda pikicha yezvingave zvakaita mudziyo
Kutanga uye pamberi pezvese, zvinoita kunge kure kure nekuve chinhu chakareruka senge Snapchat Spectacles, iyo inongotora mavhidhiyo mapfupi nekuaisa kuSnapchat. Chimwe chezvinhu zvekutanga zvemidziyo chingave chakawedzera chaicho (AR) kugona. Kumusangano Wepasi Pese Wevagadziri Musangano kutanga kwaJune, Apple yakazivisa iyo ARkit - kititi yekuvandudza yekugadzira zviitiko zvakavakirwa paAR. Apple inowanzo ita zviziviso zvakadaro uye inopa yekuvandudza kits kana yave padyo nekutanga chigadzirwa.
Nepo zvimwe zviitiko zveAR-zvakavakirwa, senge kutamba mitambo senge Pokémon Go, inogona kudzokororwa pamafoni efoni, hapana kana chimwe chazvo chingasvika padhuze nezviitiko pachiratidziro chakasimudzwa pamusoro. Anokwikwidza naApple, Google, akaedza maoko ake kugadzira zviitiko zvakadaro neiyo Google girazi rasiiwa ikozvino. Kushandisa chishandiso ichocho, vashandisi vakakwanisa kuwana chokwadi chakasanganiswa; ivo vaizoona mifananidzo pamberi pemeso avo nepo vaine munda wakajairwa wekuona kwenzvimbo dzavari. Zvinogona kunge zvisiri kushamisika zvachose kana Apple ikasimudza kwakasiiwa neGoogle, iine magirazi akangwara-anogoneswa eAR.
Asi Apple inogadzira zvigadzirwa zvevatengi uye AR parizvino inoshandiswa kunyanya pakutamba. Saka chii chingave chiri kushanda kwechigadzirwa ichi? Sekureva kwemuongorori weUBS, Steven Milunovich, Apple inogona kugadzira "HoloLens mhando ruzivo, ”Tichitaura nezveMicrosoft's Mixed realty tech, iyo inosanganisa holograms nenzvimbo dzakatenderedza. Funga magirazi maviri, ayo ari kudiwa anovhenekera kwako Notices uye anovhura ako maapplication pamberi pemeso ako.
Iwe unogona zvakare kukwanisa kuita zviito zvakaita sekuvhura nekuvhara maapplication pasina kunyatsosvika kune yako foni, sezvo chishandiso chichaona kufamba kwemaziso - Apple ichangobva kuwanikwa SMI, kambani yanga ichishanda pane tekinoroji yekutevera maziso kubva muna 1991 uye yatove nemagirazi ehungwaru anoshanda achishandisa tekinoroji. Kubatanidza tekinoroji yeSMI kunogona kuita kuti chishandiso cheApple chiitwe-nevatengi. Kuve nerunyerekupe rwemaikorofoni pachigadzirwa kunoratidza kuti inogona kunge iri Siri-inoenderana, zvinoreva kuti yaizopindurawo kumirairo yezwi. Apple yakagadziridza Siri yayo patent muChina neEuropean Union kutanga kwegore rino, kutaura kuti Siri yaizotsigira girazi rakangwara kugona.
Chakavanzika chete ndechekuti Apple inogadzira sei zvinhu zvakaita se RAM uye processor yekupa iyi kifaa simba rekomputa. Asi, sezvo Snapchat neGoogle vatoita izvi pamwero wakaringana, hazvinyatso kuoneka.
Asi isu tinoiona riinhi ichisunungura? Iyo inogona kunge iri chero nguva pakati pa2017 na2020.Apple inogona kuburitsa chigadzirwa kuti chiende pamwe neayo iPhone 8, ichicherekedza yayo yegumi yegumi mhemberero. Kana, inogona kuiburitsa kutanga kwa10, seizvo zvimwe zvitengeswa zvekutengesa zvakamboratidza. Maererano ne muongorori uye capitalist anozvitsigira Gene Munster, Apple inogona kuvhura magirazi mugore remari ra2020.
Mutengo unotarisirwa pamutengo wechigadzirwa ichi unogona kunge uri pakati pe $ 600- $ 1,000, sekureva kwaanonzi Foxconn sosi
Verenga: Google inogadziridza Google Girazi Pakati peApple Smart Magirazi Runyerekupe
Chekupedzisira, chii chakakosha magirazi akangwara uye nei Apple ichiita senge inoda kwazvo kugadzira? Dudziro yedu ndeyekuti nekubata kweApple, maApple eApple akarasikirwa nesazle yavaive nayo kusvika pa iPhone 4S - yega yega iPhone kusvika panguva iyoyo yaunza chinhu chitsva, icho chaisamboonekwa pamafoni eApple.
Nemafoni eApple akaita seSamsung Samsung S8 kumhanyisa kumberi aine maficha senge yekumucheto-kumucheto kuratidza uye 10nm processor, Apple inoita kunge yasara kumashure. Iyo yave zvakare iri yekunonoka kufamba mune yakangwara mutauri chidimbu, ichizarura mutauri wayo anopfuura mwedzi mitanhatu mushure mezvipo zvakafanana kubva kuAmazon neGoogle. Iyo kambani inoda icho chimwe chigadzirwa kuti dzorezve kumucheto kwayo uye kudzoreredza mufananidzo wayo seanotungamira mutsva mu tech indasitiri. Chigadzirwa ichocho chingangove chiri magirazi eApple akangwara.
Kana iwe uchida kuravira kwezvingaite magirazi akangwara, tarisa vhidhiyo iyi:
Flash Player mu Chrome Yakafa muna 2020: Maitiro Ekutamba Flash Files
Lenovo nyowani ThinkPad X1 Yakanyanyisa Gen 4 chikara
Yakanakisa yemahara Whiteboard maapplication e Windows 11/10 PC